Qaybta Sawir-Qaadista Sawir-Qaadashada: Mawduuca Aasaaska - Khabiirka Kala Duwan
Sawir gacmeedkani waa qalab wax ku ool ah labada isticmaalayaasha webka iyo shirkadaha doonaya inay soo dejiyaan badan oo ah macluumaadka internetka, sida content iyo sawirrada, ka yimid bogag kala duwan. Mid ka mid ah qalabka wax soo saaridda ugu fiican waa shaashadda barnaamijka xoqista . Laga soo bilaabo 2002, waxay la macaamileysaa macaamiisha shaqooyin badan oo kala duwan, sida dukaamada, shirkadaha caafimaadka iyo baabuurta. Dhab ahaantii, waxay u shaqaysaa sida database-ka, oo bixisa adeegsigeeda fursadda macluumaadka miinada si toos ah looga soo galo boqolaal ilo internet oo laga helo internetka.
Soo-saarida Xogta ka timid Websaytka
Screen-scraper wuxuu ku xiran karaa meel kasta oo websaydh ah. Kooxda xirfadlayaasha ah ee sawir-qaadayaasha ayaa ka caawin kara raadiyaha shabakada si ay u helaan natiijooyinka ay u baahan yihiin. Macaamiishu waa inay u sheegaan qaar ka mid ah macluumaadka ku saabsan waxyaabaha ay doonayaan inay soo saaraan iyo qaabka ay rabaan inay helaan. Screen-scraper waxaa laga codsan karaa luuqadaha barnaamijyada dibedda ah, sida Java, PHP iyo wax ka badan.
Maxaad u isticmaashaa Screen-Scraper
Waa software lagu kalsoon yahay iyo shirkado badan oo waaweyn oo adduunka ah ayaa ku kalsoon in ay helaan macluumaadka ay u baahan yihiin si dhakhso ah, sahlan oo lagu guuleysto dhawr ilbiriqsi. Screen-scraper wuxuu u soo saari karaa xogta macaamiishiisa maalin kasta waxaana uu qaban karaa ku dhawaad ​​nooc kasta oo website ah ee warshadaha. Si gaar ah, macaamiisha waxay soo gudbin karaan su'aalahooda waxayna helaan natiijooyinka loo baahan yahay waqti aan waqti lahayn.
Faa'iidooyinka isticmaalka Screen Scraper for Companies
Mid ka mid ah faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee shaashadda screen scrift waa xawaaraha. Waxay ururin kartaa dhammaan xogta macaamiisha dhowr ilbiriqsi. Xaqiiqdii, shaashadda wax lagu duubo ayaa soo bandhigaysa fursado badan oo shirkad kasta oo u baahan in la helo natiijooyin degdeg ah. Tusaale ahaan, haddii macaamiishu rabaan inay iibsadaan sicirrada alaabooyinka qaarkood ee ku kala firirsan webka, waxay isticmaali karaan barnaamijkan barnaamijka cajiibka ah. Intaa waxaa dheer, shaashadda wax lagu sawiray waxaa loo isticmaali karaa in lagu wareejiyo xog gaar ah oo ka mid ah nidaamka halbeeg kale, ama waxay sidoo kale isku xirnaan kartaa nidaamyada. Screen-scraper waxay taageertaa qaabab badan oo loogu talagalay dhoofinta xogta macdanta, sida XML, HTML, CSV, Access iyo wax badan. Waxaa intaa dheer, xogta oo dhan si toos ah ayaa loo dhoofiyaa qaababyo cayiman oo horey u soo saartey macaamiisha mar marka wax laga soo saaro xogta.
Waa barnaamij iskudhaf ah oo weyn oo lagu rakibi karo meel kasta. Sidoo kale, ruqsiyo badan oo software ah ayaa loo heli karaa foomka iibka ee Professional iyo Enterprise Edition. Waxay bixisaa natiijooyin wax soo saar badan oo leh boqollaal isticmaalayaal iyo shirkado. Waa qalab baarista oo bilaash ah oo la shaqeeya nooc kasta oo xogta macdanta ah, iyo sidoo kale bogag firfircoon. Isticmaalayaasha si dhakhso ah oo fudud ayaa u soo dejisan kara barnaamijka si ay u helaan xogta ay u baahan yihiin Source .